ထောက်ခံစာ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
50 လများတွင်အကြောင်း 4% ဖြင့်ပြုလုပ်သည်
Numb-ify အပြင်းထန်ဆုံး Numbing နှင့် Pain Relief
Communal News သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားမည်သို့ကူညီခဲ့ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ပြောချင်ပါသည် Numbify အွန်လိုင်း Numbing ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသွား!
ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားသည်နောက်တဖန်ထပ်မံဖြစ်ပွားပြီးသုံးနှစ်ခန့်ကြာနှေးကွေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ဘတ်ဂျက်နည်းသောကုမ္ပဏီငယ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုပြုလုပ်ရသည်။ ဘေးချင်းယှဉ်။ စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သောအခြားမည်သည့်အရာများ၌မဆိုအလွန်ပြင်းထန်သောနံနက်ခင်းမုန့်၊ ဂျယ်လ်နှင့်မှုန်ရေမွှားရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့သည်။ သို့သော်အရောင်းအ ၀ ယ်ဈေးကွက်တွင်များပြားလှသောအခြားကုမ္ပဏီများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေါ်လာနီးပါးတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်လူအုပ်ထဲတွင်မကြာခဏဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော်ငြာရှင်များကိုငှားရမ်းပြီးဂူဂဲလ်၏ကြော်ငြာများကိုပင်ပြုလုပ်နေသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကောင်းမြင်မှုဖြင့်ပင်ငွေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုပြသရန်အနည်းငယ်သာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အများအကျိုးသတင်းများအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားရသည့်အခါဖြစ်သည်။ Communal News သည်ကုမ္ပဏီများအပါအ ၀ င်မည်သူမဆိုခွင့်ပြုသည်ကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှတစ်ဆင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုသူအမြဲတမ်းနှစ်သက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသူနဲ့ဆောင်းပါးအတော်များများကိုရေးဖို့သူ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ တကယ်ကိုလွယ်ကူပါတယ်၊ သူကငါးမိနစ်အတွင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြသခဲ့သလဲ၊ သင်ဤအရာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ရုံး ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကစာရေးသူကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပါကထိုစာအရေးအသားကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ငါတို့ကဲ့သို့သောသော့ချက်စာလုံးများကိုသူအာရုံစိုက်စေခဲ့သည် အားကောင်းတဲ့, အပြင်းထန်ဆုံးထုံနှင့်ထုံ။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ထောင့်တစ်ထောင့်ထက်ပိုပြီးတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်ဆွေးနွေးပြီးနောက်ကြော်ငြာတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကကလစ်တစ်ဒေါ်လာလောက်ပဲရှိတယ်၊ ငါကဂူဂဲလ်နဲ့ကြော်ငြာတွေလုပ်တယ်၊ ဒါကနှိုင်းယှဉ်တာကအရမ်းစျေးပေါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလအနည်းငယ်အတွက်တစ်လကိုဒေါ်လာ ၂၀၀ လောက်ကြိုးစားပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ သူကကျွန်မတို့ကိုဆက်သွယ်မှု ၁၅၀၀ လောက်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ Communal News ကြော်ငြာတွေနဲ့ပြောခဲ့တယ်။ သင်မှန်းဆမိသည်နှင့်အမျှကြော်ငြာကိုကျွန်ုပ်မုန်းသည်။ သို့သော်ဒေါ်လာ ၂၀၀ နှင့် click based သည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်အလွယ်တကူအရသာရှိပုံရသည်။ ဒေါ်လာစျေးကပရိသတ်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲသော site အတွက် click သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမေဇုန်၊ Walmart နှင့် Ebay မှတဆင့်သွားများဖြီးနေသောအကောင့်များကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Numbify ထုတ်ကုန်များကိုသော့ချက်စကားလုံးများနှင့်အတူတူပင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်နှင့်ပေါ့ပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအာရုံစိုက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Numbify ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤပါးလွှာသော်လည်းအလွန်ကောင်းသောနေရာသည်“ အားကောင်းသော / အသန်ဆုံး / ထုံ / ထုံခြင်း” စျေးကွက်၏။
နာကျင်မှုဝေဒနာသက်သာစေရန်အတွက်အခိုင်ခံ့ဆုံးသော Numbing Cream!
အဆင့်မြင့်အစောပိုင်းရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာဝေဒနာသည်များသည်နာကျင်မှုသက်သာစေရန်အတွက် Numbing Lidocaine ကိုအားစိုက်ရှာဖွေနေသည်။
အကောင်းဆုံး / အပြင်းထန်ဆုံး Numbing ထုတ်ကုန်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ပိုမိုကျန်းမာသော Pain Relief & Numb-ification လမ်းညွှန်
Tattoo အဆိုတော် Craig Beasley - သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း & အကောင်းဆုံး / အပြင်းထန်ဆုံး Numbing Cream
Bedsore ဒဏ်ရာစောင့်ရှောက်မှုကုသမှု - နာကျင်ခြင်း၊ အနာရောဂါပျောက်ကင်းခြင်းနှင့်ယားယံသက်သာခြင်းအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအရှိဆုံး Bedsore Numbing Cream
Tattoo Aftercare ကုန်ပစ္စည်းကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာကောင်းများရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုရန်အခမဲ့ခံစားရပါ၊ မင်းသူတို့ကိုချစ်လိမ့်မည် !!!
ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သောအခြားဆိုဒ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုတွန်းအားပေးသည့်နှင့်အများပိုင်စာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်ဆောင်းပါးများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တောင်မှကျွန်ုပ်တို့လွတ်လပ်သောတတိယပါတီ site ကိုချိတ်ဆက်ရန်တိုးမြှင့်ရန်အကြောင်းပြချက်ရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်၊ သူတို့၏အဆင့်တက်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ပင်။
ထိုအခါချက်ချင်းနီးပါးရောင်းအားတက်စတင်ခဲ့သည်။ Walmart ကိုသူတို့မဟာဗျူဟာပေါ်တက်လာပြီးအပြင်းထန်ဆုံးရေတွက်ဖို့အတွက် Bing ရှာဖွေရေးကြော်ငြာမှာကျွန်တော်တို့ကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့အမေဇုံကငါတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးအစားတွေကိုကြီးစိုးခဲ့တယ်၊ တောင်မှအမေဇုံရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးရေတွက်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တယ် ၄ လခန့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စုစုပေါင်းရောင်းအားသည် ၅၀% နီးပါးတက်ခဲ့သည်။ ၃-၁၀-၂၀၁၉ တွင် Amazon ၏ရှာဖွေမှုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သည် အပြင်းထန်ဆုံးထုံ ကျနော်တို့ထိပ်တန်း 22 ရာထူး၏ 24 ရှိခဲ့ပါတယ်။
သင်အမေဇုံရှာလျှင် ထုံဆေးများ ကျနော်တို့ထိပ် 24 အတွက်သုညရှိခဲ့ပါပြီ။ သုံးစွဲသူများစွာဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောဤစျေးကွက်နှင့်လည်ချောင်းနာသည့်နည်းဗျူဟာများတွင်အရင်းအမြစ်များအကန့်အသတ်ဖြင့်လယ်ယာမြေများကိုထိုးဖောက်ရန်ခက်ခဲခဲ့သည်။
Amazon နှင့် Walmart သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်နေရာများကို Bing နှင့် Google ဝက်ဘ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်ကုန်စာရင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့ရသည် အကောင်းဆုံးအနေနှင့်၊ သင်အချိန်အနည်းငယ်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်အတူအလွန်နည်းသောကြော်ငြာဘတ်ဂျက်နှင့်အတူပင်သင်လည်းအင်တာနက်ပေါ်တွင်အောင်မြင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့ရသည်။ သင်တန်း၏အများပိုင်သတင်း၏အကူအညီဖြင့်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ Communal News ကြော်ငြာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည် Numbify.com နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသောနယ်ပယ်၌ငါတို့ခိုင်မာတဲ့အင်တာနက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။ Bing နှင့် Google ရှာဖွေမှုနှစ်ခုလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစကားလုံးများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထိပ်တန်းရာထူးနေရာများထားရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်များအတွင်းသိသိသာသာတိုးပွားလာခြင်းကိုတွေ့မြင်ရသည် Numbify.com အွန်လိုင်းအမှာစာများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် Numbify.com မတ်လ 300 တွင် 2019% ခန့်သည်အမှာစာများအားစောင့်ကြည့်နေပြီး 80% သည်ဖောက်သည်အသစ်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်တိုဘာ 2018 မစတင်မှီလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက။
အကယ်၍ ဒီပုံပြင်ဟာနည်းနည်းလေးပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူအသံထွက်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒါမှန်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာတစ်ခုစီ၏စာလုံးများ၊ ဆောင်းပါးများနှင့်ကြော်ငြာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရသည်။ ကြီးမားသောတွန်းအားအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်မရေမတွက်နိုင်သောနာရီများကိုညှိနှိုင်း။ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ယခုအခါအသွားအလာများလာမည်ကိုစိုးရိမ်မည့်အစားကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပြောင်းလဲမှုများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အာရုံစိုက်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသွားအလာသည်ရောင်းအားထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသောထိပ်တန်းနယ်ပယ်တွင် (ဥပမာအားဖြင့်အများဆုံးသောနံပါတ်တစ်အမျိုးအစားကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့) ရနိုင်ပါကသင်၏ရောင်းအားသည်မြင့်တက်လာမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခိုင်ခံ့သောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရရှိရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများနှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သည့်နံပါတ်များပါဝင်သောကြေညာချက်များကိုသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တစ်ခုလုံးနောက်သို့လိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောထုတ်ကုန်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းမပြုရန်သတိပေးလိမ့်မည်။ သုံးနှစ်နေခဲ့ရတယ်၊ တိုးတက်မှုကနှေးကွေးခဲ့တယ်၊ စျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ပဲ။ ယခုတိကျသောပစ်မှတ်ထားသောသတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာ ၁ ခုကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ချဉ်းကပ်မှုသုံးခုရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ အခုတော့အဲဒါကိုပြန်လုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ငွေစုဆောင်းရုံတင်မက (အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး အတွက်ကြီးမားတဲ့ ဦး စားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ရုံသာမက) ငါတို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုပိုပြီးတာ ၀ န်ယူတတ်လာတယ်။ အဲဒါကြောင့်ငါအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခြေလှမ်းတိုင်းမှာတွေ့နိုင်တယ်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးအကြိမ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏အများစုကိုထိန်းချုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပေါင်းအသင်းများကိုကောင်းမွန်သောဆောင်းပါးအချို့ကိုလွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ပြုခြင်း၊ ဤမျှစျေးနှုန်းချိုသာပြီးကြော်ငြာကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (ဒေါ်လာရာဂဏန်းအနည်းငယ်သာကြော်ငြာခြင်းဟာဘာမျှမဟုတ်ပါ) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်4လအတွင်းကျနော်တို့နီးပါးသုည incremental စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသုံးစရိတ်တိုးနှင့်အတူဝင်ငွေကို 50% တိုး, ဘယ်လိုရောက်ရှိသရုပ်ပြပါပြီ။ လာမယ့်ထုတ်ကုန်ကိုထုတ်မယ့်အထိစောင့်လို့မရဘူး နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးအတွက် Numbify။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပဏာမစမ်းသပ်မှုသည်၎င်းသည်အပြင်းထန်ဆုံးသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည် နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေး ထုတ်ကုန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်းထန်ဆုံး Numbing Cream အမျိုးအစားတစ်ခု - Numbify.
ကျွန်ုပ်သိသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်သောမဟာဗျူဟာများစွာကိုထုတ်ဖော်မပြောသင့်ပါ၊ သို့သော်အများပိုင်သတင်းများကကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစားစီးပွါးရေးအောင်မြင်မှုအချို့ကို၎င်းတို့နှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များဆီသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားမိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ တစ်ခါတလေမင်းကအကြွေးကိုဝေမျှရမယ်။
Numbify စစ်ဆင်ရေး Manager ကို
သင်၏ထည့်သွင်းမှုကို၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးကလစ်တစ်ချက်လျှင် $ 1 သာတင်ပါ။